मर्सियन पाई | ThermoRecines
सुरूवात61 मिनेट6 व्यक्ति380२ क्यालोरी
मासु pies मा हेर्नुहोस् स्वादिष्ट छन्, तर तिनीहरूले मलाई एक विकल्प दिन भने, म संग छडी मर्सियन एम्पानाडास.
मलाई थाहा छैन यदि तपाईं तिनीहरूलाई चिन्नुहुन्छ भने ... म तपाईंलाई घरमा घरमा गर्न प्रोत्साहित गर्दछु। हामी आधा थर्मोमिक्समा पीठो बनाउनेछौं यसको फाइदाको साथ यो सधैं राम्रोसँग बाहिर आउँदछ। र प्याडि यो कच्चा जान्छ (उमालेको अण्डा बाहेक) त्यसैले यो सरल हुन सक्दैन।
यदि तपाई क्षेत्रबाट हुनुहुन्न भने तपाईको पेट्रोनोमी चिन्नु पर्दछ मर्सिया क्षेत्र। यसको कुनै बेकार छैन। थर्मोरसेटासमा हामी पहिले नै प्रकाशित गरिसकेका छौं zarangollo र ईस्टर केक। सबै महान।
1 मर्सियन पाई
खुर्सानी, टमाटर, मटर, अण्डा र टुनाको साथ स्वादिष्ट मर्सियन एम्पानाडा। एक परम्परागत र स्वादिष्ट नुस्खा जुन Thermomix को साथ बनाईएको छ।
सूर्यफूल तेल को 100 g
Ry 375 ग्राम पेस्ट्री पिठो (र केहि चीजमा हामीलाई आटाले काम गर्न आवश्यक पर्छ)।
१ प्राकृतिक टमाटर, ग्रेटेड वा बारीक काटिएको
तेलमा टुनाको २०० ग्राम
२ कडा उमालेको अण्डा, काटियो
मटरको g०० ग्राम
२०० ग्राम हरियो मिर्च, टुक्राहरूमा काटियो
२०० ग्राम रातो मिर्च, टुक्राहरूमा काटियो
अतिरिक्त कुमारी अलिभ तेलको एक थोपाई
आटा पेन्ट गर्न १ पिटिएको अन्डा
हामीले शीशामा सूर्यफूलको तेल, दाखमद्य, दूध, पेपरिका र नुन राख्यौं। हामी प्रोग्राम Seconds सेकेन्ड, गति 30.
हामी पीठो र कार्यक्रम थप्छौं Seconds सेकेन्ड, गति 15। हामी गिलासबाट पीठो निकाल्छौं र यसलाई दुई भागमा विभाजन गर्दछौं, एउटा अर्को भन्दा ठूलो। हामीले आटा दुई प्लास्टिक शीटहरू वा ग्रीसप्रुफ कागजको दुई पाना बिच राख्यौं र रोलिंग पिन प्रयोग गरेर हामी ठूलो भाग तन्काउँदैनौं जुन यो एकदम पातलो हुन्छ। हामी यसलाई लगभग x० x c० सेन्टिमिटर आयताकार मोल्डमा राख्छौं।
हामीले भर्ने तत्वहरू माथि राख्यौं, तिनीहरूलाई किनारहरू बाहेक सम्पूर्ण सतहमा वितरण गर्दै। हामी भद्राक्षको तेलले थोप्लो र थोरै नुन थप्दछौं।
हामी आटाको अर्को आधा रोल आउट गर्दछौं (जसरी हामीले अघि गरेका थियौं) र भरिने माथि राख्दछौं। हामी किनारहरूलाई ट्रिम गर्दछौं (यदि तिनीहरू किनारबाट फैलन्छन्) र तिनीहरूलाई छाप लगाउँछौं। यी कटौतीको साथ हामी पाईको सतह सजावट गर्न सक्छौं। अन्तमा, एक पटक सजाईएपछि, हामी पाईको मध्य भागमा प्वाल वा टुक्रा बनाउँदछौं ताकि स्टीम उम्कन सक्दछ।
हामी पिटिएको अण्डाको साथ सतहमा रंग लगाउँदछौं र minutes० मिनेट वा सुनौलोसम्म बेक गर्दछौं।
थप जानकारी - zarangollo, इस्टर केक
स्रोत - हाम्रो क्षेत्रीय खाना (भोर्वार्क)
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: एपेटाइजरहरू, क्षेत्रीय भोजन, आटा र रोटी, गर्मी रेसिपी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » एपेटाइजरहरू » मर्सियन पाई
मलाई मर्सियन एम्पानेडास मनपर्छ। उनीहरूले मलाई मेरो बाल्यावस्थाको सम्झना गराउँदछन् जब हामी मेरो बुबाको परिवारलाई भेट्न जान्छौं। म निश्चित छु कि यो तुरुन्तै गर्नेछु र म तपाईंलाई यसको बारेमा भन्नेछु। आशा छ कि तपाईले अर्कै मर्सियन डिस्केसीका लागि नुस्खा राख्नुभयो जुन मासु पाई हो, जुन पफ पेस्ट्रीसँगै छ। तपाईंको अद्भुत व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद, ती सबै मेरो घरमा सफल छन्
तपाईं देख्नुहुनेछ कति राम्रो देखिन्छ, इसाबेल। केकको बारेमा ... कति स्वादिष्ट, सही? तर मलाई लाग्छ कि तिनीहरू एम्पानेडास भन्दा धेरै जटिल छन् (मैले उनीहरूले कसरी शीर्ष बनाउँदछन् र यो एक कला हो भनेर मैले देखें)। यदि मैले रेसिपी फेला पारेमा, श not्का नगर्नुहोला कि मँ यो तपाईंसँग साझा गर्छु।
तपाईको टिप्पणी को लागी र हामीलाई विश्वास गर्नु भएकोमा धन्यवाद।
नमस्ते एसेन मलाई यो नुस्खा मनपर्‍यो, मैले यो बनाउनुपर्‍यो र म तपाईंलाई कसरी भन्दछु भनेर बताउँछु। तपाईले माछाको पूड राख्नुपर्नेछ जब सक्नुहुन्छ
नमस्ते भव्य! एम्पानाडा बनाउनुहोस्, तपाईले देख्नुहुनेछ कि यो कति स्वादिष्ट छ। जब म सक्दछु, म तपाईंको पद्दिनमा पुग्छु।
नमस्ते एसेन, कुनै प्रकारको खमीर छैन? तपाईको सबै रमाईलोको लागि धेरै धेरै धन्यवाद
होईन, यसले खमीर समावेश गर्दैन। आटा यो बिना राम्रो देखिन्छ, तपाईं देख्नुहुनेछ।
तपाइँको टिप्पणी को लागी र हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
हेलो एसेन: यो पहिलो पटक हो जब मैले कुनै चीजमा टिप्पणी गरे। म तपाईंलाई खमीरको बारेमा सोध्दै सोचिरहेको थिएँ तर मैले यो देखें कि तपाईंले यसको जवाफ दिनुभयो तर मँ यो मौका गुमाउन चाहान्न। मैले केहि गरेको छु र तिनीहरू सँधै सफल भएका छन्। धन्यबाद।
धेरै धेरै धन्यवाद टेरेसा। तपाईंको जस्तै टिप्पणीहरूले हामीलाई हाम्रो "काम" मा गर्व गर्दछ। तर सत्य यो हो कि तपाई बिना यो सबैको अर्थ हुँदैन।
नमस्ते एसेन, मेरो बाल्यकालका कस्ता रमाइला सम्झनाहरू, जब मसँग कुनै समस्या वा जिम्मेवारीहरू थिएनन्, मेरा आमाबुवाहरू यहीँ हुन।
हामी गर्मीको समय सान पेड्रो डेल पिनाटर नजिकैको देहेसा डे क्याम्पोआमोरमा बिताउन गर्थ्यौं, त्यहाँ हामी मेरा आमाबुबासँग "ला पेलाडिला" भन्ने पेस्ट्री पसलमा जान्थ्यौं, र हामीले "टोसिनो डे सिएलो" किन्यौं, जुन शानदार थियो र " डियर केक», यो सम्झना तपाईले अहिले नै खानु भएको जस्तो लाग्यो, यसमा मीठो आटा थियो, मलाई लाग्छ यसलाई «फ्लोरा पास्ता» भनिन्छ, र भरिने नुनिलो छ, कुखुरा र कडा उमालेको अण्डाबाट बनेको छ।
यदि तपाईं यो ब्लगमा पोस्ट गर्नुभयो भने यो उत्तम हुनेछ।
खैर, ब्लगमा बधाई, यो शानदार छ
त्यो केक मैले निश्चित रूपमा प्रकाशित गरेको छु। म धेरै वर्षदेखि मर्सियामा बसिरहेको छैन तर तपाईको सन्देशलाई धन्यबाद दिन्छु, मैले डोलाई केक मागेर हेर्ने आदेश गरें (संयोगवश मेरा पति आजको दिन मर्सिया गएका छन्)। जस्तो म यो मनपर्दैछु, अर्को चरण यो घरमा गर्नु हो, र अर्को, यसलाई प्रकाशित गर्न।
तिम्रो सन्देशको लागि धन्यवाद। मलाई मन पर्यो।
तपाईको श्रीमान्लाई भन्नुहोस कि मर्सियामा पेलाडिल्ला पनि छ
ल्याउनुहोस् २, हाहााहा
इम्पानाडा एकदम स्वादिलो ​​छ! मलाई यो मन पर्यो, आटा एकदम सजिलो र स्वादिष्ट छ !! म शाकाहारी भएको हुनाले मैले आलुका लागि टुनाको विकल्प लिएको छु, जसलाई मैले अलिकति तारेको छु, र मैले अरू सबै थोकको थोरै मात्रा थप गरेको छु। धन्यवाद!!
उत्कृष्ट पिटर, र तपाइँको अनुकूलन उत्तम। मलाई यो पाईको लागि धेरै माया छ
म यो गर्न चाहन्छु तर मलाई केही शंका छ, खुर्सानी पकाइएको छैन, के यो कच्चा थपिएको छ? र मटर, तिनीहरू क्यान्ड वा उमालेको छ? धन्यबाद
यस अवस्थामा मिर्च कच्चा राखिन्छ। यो चुलोमा पकाइन्छ।
मटरमा, म सामान्यत: क्यान्ड प्रयोग गर्दछु तर तपाईं आफ्नो लागि उमालेको मटर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जे चाहानुहुन्छ।
म आशा गर्छु तपाई लाई यो मन पर्छ 😉
मैले दिनको बिचमा यो पीठो बनाएको छु र यो निकै कुरकुरे भएको छ, यद्यपि अर्को पटक म अलि अलि कम तेल हाल्ने छु र मैले यसलाई कच्चा राख्ने आँट गरेन…। म धेरै डरपोक छु? तर मैले यो गर्नु पर्छ र मलाई श the्का नछोड्नुहोस्।
सिर्भा केकहरू भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ र तपाईंले तिनीहरूलाई अर्डर गर्नुपर्दछ, तर कार्टेजेनामा उनीहरूले उनीहरूलाई रिचीइइइउइओसिमो एसएसएस बनाउँदछन्… चुम्बन !!!!
हे, यसैले म तपाईंलाई डरपोक भन्न चाहन्न! 🙂 तर अर्को पटक जानुहोस् किनभने यो राम्रोसँग पकाइएको छ, वास्तवमै।
मैले एक पटक थर्मोमिक्समा सिर्भा केक बनाएँ तर मलाई लाग्दैन कि मैले यो नुस्खा प्रकाशित गरेको छु। यो पनि धेरै राम्रो थियो यद्यपि म अधिक इमान्डान्डसमा छु 😉
ग्लूटेन-मुक्त कन्स्टार्च केक